Nockherberg Starkbierfest - Munich Beer Festival Strong | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Nockherberg Starkbierfest – Munich Beer Festival Strong
Inta badan safarleyda khamriga jecel waxay leeyihiin Munich oo ku jirta liistadooda. Waxaa la siiyey in Oktoberfest waxaa jiri lahaa mid aad u, laakiin Nockherberg Starkbierfest ah – Munich Beer Festival Strong keentaa wax dheeraad ah. No, ma dadkii badnaa. Waxaad arki doonaa waayo-aragnimo kala badh sida badan. Laakiin biir waa double xoogga! Sanqadhaha sida habka ugu fiican ciyaartoyda March iyo Spring, anaga!
Munich, Bavaria ee caasimada, waxay hoy u tahay dhismayaasha qarniyo jir ah iyo matxafyada badan. Magaaladii loo yaqaan for dabaal Oktoberfest sanadlaha ah iyo hoolalka ay biir, oo ay ku jiraan Hofbrauhaus ku socdeen, asaasay 1589. In Altstadt ah (Town Old), bartamaha Marienplatz square wuxuu ka kooban yahay calaamado sida Neo-Gothic Neues Rathaus (town hall), la glockenspiel show ah oo caan ah in ogashahay iyo reenacts sheekooyinka ka qarnigii 16aad.
Ma tahay waqtigii aad ugu horeysay booqanaya Munich? Waxaad noqon doontaa faraxsanahay in la ogaado in ay tahay magaalo booqdaha-friendly aad, in kasta oo arrin. Waxay leedahay a aadka functional kaabayaasha, waxay bixisaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah labada soojiidashada gudaha iyo dibaddaba, cimilada uu yahay mid fudud ka badan qaybaha waqooyi ee Germany waana super fududahay in ku dhowaad aad u hesho oo aad tagto Nockherberg Starkbierfest – The iid biir xoog ku Munich.
MAXAY KU SAABSAN caqabadaha luuqadda?
Ha ku hadlin Jarmal ama Bavarian? dhibaatada No! Inta badan jiilka soo koraya waxay ku hadlaan Ingiriis, laakiin ay awoodaan in ay isticmaalaan xoogaa Jarmal (ama xataa Bavarian, haddii aad ku dhici) si weyn u mahadnaqayo by deegaanka. Dalku waxa uu leeyahay sumcad ah in aan furfurnayn, laakiin waa ka fog runta. Oo barbariyiintiina Munich waa ciyaar saaxiibtinimo oo waxtar leh marka aad bilowdo helitaanka si ay u ogaadaan. Mid ka mid ah xubno ka suurto galka ah ee “naxdinta dhaqameed” waxaa laga yaabaa in sida xataa meelaha hoose ee ugu mashquulsan, weli heli kartaa mid aad u xasilloon habeenkii jiilaalka maalmaha ama Sunday a; Munich siin karaan pros badan ee nolosha magaalada (makhaayadaha waa weyn, dhismayaasha quruxda badan, waxbadan waxyaalaha la samayn karo) laga jaray badan oo dhaqdhaqaaqa, hawlaha, iyo stress. magaaladan waxaa qoreysa ugu wanaagsan Caalamka badan: magaalooyinka ah deegaanka, hareereysan dabiiciga ah u qurux badan, dhaqamada kala duwan iyo kuwa caalamiga ah milmay badan oo dhaqameed siyaabo Bavarian nolosha. Oo waxaa shaki kuma jiro in biir waa caansan dunida ee sabab!
Hamburg si Tareenadu Munich
Leipzig in Tareenadu Munich
Ghent in Tareenadu Munich
Muddo seddex isbuuc ah guga hore, Breweries oo dhan guud ahaan Munich qotomiyey hoolalka biirka ay.
The iid biir xoog iska leh Munich Iyo sidii beero biirka iyo Oktoberfest ah. Dhab ahaan, xafladdan biirku waxay noqon kartaa magaalada sirta ugu fiican. Waa dhab oo xataa ka weyn yahay Oktoberfest, bilaabmay bartamihii 1600naadkii, by suufiyadoodii Paulaner Munich iyo Nockherberg Paulaner waa goobta asalka Carwooyinka biir xoog Munich ee!
The suufiyadoodii khaa'inka dardaray sharaabka biir ah in iyaga dhex soonka deymin, oo wuxuu u yeedhay ay qaado-i-up 'biir aabbihiis ugu duceeyey ee' ama 'saliiddii quduuska ahayd ee St. Francis '. Ugu dambeyntii, waxay degeen on 'Salvator' - Laatiin for badbaadiye.
Salzburg in Tareenadu Munich
Cologne si Tareenadu Munich
Bremen in ay Tareenadu Munich
Iyo meesha saxda ah ma Beer Festival Munich xoog ka timid?
Sheekada asalka ah ee ugu badan ee la sheego starkbier waa sheeko fudud oo suufiyada gaajaysan. Lagu qasbay in ay si degdeg ah inta lagu guda jiro deymin, suufiyadoodii waxay bilaabeen inay soo dhiga starkbier sida hab dol si aad u hesho ka buuxsami calories. Mar labaad, to content sare diri adag mahad (loo yaqaan johannesört), starkbier noqday aqoonsaday cuntada dareeraha ah.
Laakiin wixii ka baxsan in, Starkbier sameeya, Dabcan, leeyihiin content a khamriga sare (laga bilaabo 7.5%-9%). In la eego dhadhan, waxaa malty oo la yaab leh (laga yaabee in aan deceivingly odhan) simi iyo saamaynta ay hubaal doono 1000% Socda aad on. Like, "Fadlan ma'am, joojin cayaaray miiska saaran - aad naxdin leh carruurta "gurguurta oo aad ku. Waxaad ayaa loo digay.
Si xisaabo waxyaabaha kor: starkbier waa biir xoog leh, way ka xoog badan tahay waxyaabaha khamriga ku jira laakiin sidoo kale walxaha adag, aad adiga iyo qasan buuxin doonaa. Waxaad ayaa loo digay!
Talooyin Degdeg ah oo loogu talagalay Xafladda Beerka Xoogan ee Munich
qaad lacag caddaan ah!
Iyadoo dukaamada waaweyn iyo shopping warbaahinta ay u badan tahay in ay aqbalaan credit card aad, inta badan maqaayadaha iyo dukaamada Munich waxay aqbali doonaan oo keliya kaararka lacagta ama EC (kuwaas oo sida kaararka debit). Hubi in aad leedahay euros ku filan kula isticmaalka maalin walba.
dhageeysto biir xoog
Starkbieranstich The loola jeedaa dhageeysto ee biir xoog (i.e.. siyoodba qoriga ah) - waa nooc ka mid ah heshiis weyn Munich oo ka dhigan bilowga Starkbierfest. At Paulaner ahay Nockherberg, inay ku Xusaan dhageeysto ee ay Salvator biir xoog leh lagu dubay siyaasadeed muusikada.
Dadka macno ahaan buuxin hall biirka ay la siyaasiyiinta maxalliga ah iyo kuwa ka dhigi xiiso leh oo ka mid ah iyada oo loo marayo song iyo dramatics. Haddii aad sheeegateen oo hubinaya waxa dhacdo waa sida, halkan waa clip YouTube ka sanadkii la soo dhaafay.
Zurich si Tareenadu Munich
Mainz in Tareenadu Munich
Augsburg inay Tareenadu Munich
Ma doonaysaa inay jartaan tikidhka tareenka si ay u Munich a? Markaasuu madaxa ka badan si ay u SaveATrain halkaas oo aad ka heli doontaa tigidhka ku daqiiqo la No peaky, dheeraad ah, iyo khidmadaha qarsoon!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / fr ama / luqadaha de iyo ka badan.
#Beerfestival #Nockherberg xaflad biir oo xoog leh #dhageeysto biir xoog #TraveltoMunich BeerTravel xafladda cabbitaanka Munich
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe